China Car Air Myọcha N'ihi OEM NO.1500A023 1444RU ụlọ ọrụ na-emepụta | Chuangqi
Car Air Myọcha N'ihi OEM NO.1500A023 1444RU
Arụmọrụ ka mma:
- Unyi ikuku nzacha ga-ekwe ka otu ego nke ikuku ka engine dị ka a dị ọcha otu ga-.
- Igwe ejidere ikuku ga-ata ahụhụ site na ọnwụ nke arụmọrụ ya ma rie mmanụ ọzọ.
- Obere ihe nke uzuzu ma obu aja nwere ike imebi ihe di n’ime ya dika piston na cylinders.
- Agbanwe agbanwe ihe nzacha ikuku bụ ụzọ dị ọnụ ala iji gbatịa ndụ injin.
Ụdị: Ihe nzacha ikuku
Akụrụngwa: Environmental eyi / PU + Non kpara Fabric
Agba: ọcha; ojii ma ọ bụ customizable
Nha Ogologo: 268, Nkebi: 184.5, Ogo: 54
Ihe ederede: 1.100% Na-abụghị kpara
2.Filtration arụmọrụ n'elu 99%.
Ebe Mmalite Hebei, China (ala)
Tụkwasịnụ Ikike 50000 PC / ọnwa
Asambodo ụlọ ọrụ ISO / TS16949; ISO9001: 2000
Nhazi Ahịa si aghụghọ, chọrọ & logos na-nnọọ.
Ọrụ ka mma & arụmọrụ:
Nnyocha egosiwo na enwere ike ịbawanye akụ na ụba site na 14% site na nzacha ikuku dị ọcha.
Conqi ikuku nyo mma na ogo nke ọcha ikuku abanye na engine, a mma na engine arụmọrụ na arụmọrụ.
Nlekọta Nchekwa Elu na Ọganihu Igwe Na-arụ ọrụ nke ọma ruo ihe dị ka 99% ikuku dị ọcha tupu ya abanye n'ime injin ụgbọ ala.
Igwe ikuku ikuku dị elu dị elu maka mwepụ nke ikuku ikuku dị ka ájá, pollen, na irighiri ihe ndị ọzọ mgbe ha na-enye ikuku dị elu, na-anaghị egbochi ikuku, iji hụ na arụmọrụ kachasị mma nke na-eme ka kilomita kilomita kwa galọn dịkwuo mma.
Kwekọrọ n'Ozizi na Mitsubishi ASX, Lancer, Outlander, Outlander Sport, RVR. Kpamkpam mere, engineered, na-anwale izute na gafere niile MITSUBISHI OE ikuku nyo chọrọ.
Conqi ikuku nyo zuru okè dabara n'ime ụlọ dị ka kwa OE imewe
Na-enyocha ihe ndozi mgbe niile
Ọtụtụ Uru nke Conqi Air Nzacha
Enwekwukwa Fuel Economy
Na anyị elu-arụmọrụ ikuku nzacha ị ga-enwe ezigbo mmanụ ọkụ na mma engine combustion, boosting ụgbọala gị n'ozuzu mmanụ ụgbọala aku na uba.
Ọrụ dị elu
Premium Nche akpakanamde ikuku nzacha na-ebuli eruba nke ọcha ikuku n'ime engine maka enwekwukwa engine arụmọrụ na ike.
Emepụtara iji zute ma ọ bụ karịa OEM (Ngwaọrụ Akụrụngwa Ngwaọrụ) chọrọ, anyị na-enye otu ihe ahụ dị ka nzacha mbụ. OEM kwesịrị ekwesị ana achi achi mfe akpaaka ikuku nyo echichi oge ọ bụla.
Na ijikọta ọnụ ọnụ, ọnụ ahịa ndị ahịa na ọkwa dị elu kachasị elu, igwe ikuku ndị a na-enye nnukwu uru yana nchebe na arụmọrụ dị elu.
* Conditionsfọdụ ọnọdụ nwere ike imetụta ndụ ikuku nzacha. Ihe ndi nwere ike ibughari otutu ndi ozo bu:
Ọnọdụ ụgbọ ala
Uzo iru mmiri
Okporo ụzọ na ebe ndị mmadụ na-ekwo ekwo
Ndị na-egosi oge ọ bụ oge iji dochie igwe nyocha ikuku gị
Engine Light Abịa On: Ọtụtụ ụgbọ ala nwere igwe ikuku ikuku nke na-ewepụ ọkụ ọkụ elele.
Nnyocha Anya: Ngwunye ikuku ikuku Conqi na-acha ọcha ka ị wee hụ ma ha ruru unyi. Lelee mpempe akwụkwọ na mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ maka uzuzu na irighiri ihe.
Mbelata mmanụ ọkụ mmanụ:Mgbe injinia na-enweta obere ikuku oxygen, ha na-erikwu mmanụ. Ọ bụrụ n'ịchọpụta akụ na ụba mmanụ na-agbada, ịnwere ike dochie nza ikuku.
Injin na-adịghị mma:Mmachibido ikuku na-eme ka mmanụ na-ere ọkụ na-apụ na injin dị ka ihe fọdụrụ. Soot na-agbakọta na plọg ọkụ, nke nwere ike ime ka injin ahụ ghara ịmị ọkụ.
Belata ịnyịnya:Dochie ikuku nyo nwere ike melite osooso ma ọ bụ horsepower. Ọ bụrụ na ụgbọ ala gị azaghị nke ọma ma ọ bụ jerks mgbe ị kwụgoro na ngwa ngwa, injin nwere ike ọ gaghị anata ikuku ọ kwesịrị ịrụ.
Black Sooty Anwụrụ ọkụ ma ọ bụ Ire ọkụ:Supplykọ ikuku na-adịghị mma nwere ike ime ka mmanụ ghara ịgba ọkụ kpamkpam n'oge ọkụ ọkụ. Mmanụ na-adịghị efe ọkụ na-apụ ụgbọ ala site na ọkpọkọ na-ekpochapu, ikekwe na-ebute anwụrụ ọkụ ma ọ bụ ire ọkụ.
1. Elekwasị anya na n'ichepụta asọmpi ụgbọ ala nzacha maka anyị ahịa izute ha ahịa, nye ọkachamara ihe ọmụma nke mmepụta nke ngwaahịa.
2. Ahụmịhe bara ụba na mbupụ ụgbọ ala na nkwụnye ọkụ na Europe, United States, Russia, Mexico, North America, Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia, na mba ndị ọzọ, anyị maara banyere ahịa na omenala ha na mpaghara na anyị nwere ike ịnye gị ndụmọdụ mbubata.
3.Trade nkwa iji hụ na anyị nwere ike ịdabere na ya, wee nweta ọnọdụ mmeri.
Nke gara aga: Emeputa Supply Elu àgwà ikuku Myọcha OE NO 2730940404 1120940004
Osote: Auto Cabin Air nyo MME61701 MZ341012EX MN185231 MR398288 MZ600143 MZ690361 XR398288
Air Myọcha Assy
Air Myọcha N'ihi Hino Truck
Air Myọcha N'ihi Motorcycle
Car Air Myọcha N'ihi Toyota
Honda Ikuku Myọcha
Auto engine akụkụ ikuku nyo 17801-0C020 C23107 ...
Emeputa Tụkwasịnụ High quality Air Myọcha OE ...